भ्यालेन्टाइनलाई प्रेमपत्र - शुभयुग
अधिवक्ता स्वागत नेपालप्रकाशित मिति: २०७७ फागुन २, आईतबार (७ महिना अघि)
७७४८ पाठक संख्या
मेरी माया, मेरी सपना !
तिमी अत्यन्त सुन्दरी थियौ, र अहिले पनि उत्तिकै । तिमी नेपालतिर आउँदै गर्दाका समय म सम्झिरहेको छु– (सन् १९९१ र वि.संको २०४६÷०४७) दक्षिण अफ्रिकामा नेलसन मण्डेला तिमीलाई कुरेर २७ वर्षदेखि एउटा अँध्यारो अकल्पनीय कालो जीवन विताइसकेपछि तिमीलाई भेट्न मात्र पाउँदै थिए । उनले २६ अक्टोबर १९७६मा कालकोठरीबाटै प्रेमिका विन्नीलाई लेखेको पत्र सम्झन्छु – मसँग सुरक्षित तिम्रो तस्वीरको नाक एकदम मनपर्छ र जब तिम्रो त्यो तस्वीरको नाकसँगै मेरो पनि नाक छाम्छु, मेरो सम्पूर्ण रक्तकोशिकाबाट विद्युतीय तरंग उत्पन्न हुन्छ र उत्तेजित बन्छु हाम्रो दिन ल्याउन । सबैको साझा दिन ल्याउन ।
मण्डेलाले के त्याग गरे र विन्नीका लागि ? यो विन्नीको तर्क थियो । विन्नीले के छोडिनन् ? सारा सारा सम्भावनाहरु छोडिन् रे । प्रेमका लागि के त्यागे र मण्डेलाले बुढेकालमा साथी भेटाएर फेरि विच्छेद भोगेका मण्डेलाले आफ्नो वकिल डेलि पोफसँग भनेका थिए– यो अदालतलाई भनेर केही फाइदा छैन । तर म पनि त एउटा पीडामा थिएँ नि । कालकोठरीका २७ वर्षसम्मको लामो रात विताउँदा । अहिले फेरि अलिकति जीवनको उज्यालो दिएर खोस्ने उसले मलाई चाहिँ के केही पनि क्षति पुर्याएकी छैन ? त्यसको क्षतिपूर्ति के हुन्छ त ? तर वकिलको भनाइ थियो , जोसँग केही छैन उसको पनि क्षति, त्याग हुन्छ कहिँ ?
हो के नै त्यागेका थिए र मण्डेलाले विन्नीका लागि ? बरु, नेदरल्याण्डका युवराज जोन फ्रिस्कोले मानवअधिकारवादी मावेल पिस्से स्मिथसँग विवाह गरेकोले आफ्ना सम्पूर्ण मान् पद्वीहरु त्यागे ।
डेनिस राजकुमार फ्रेडरिकले अष्ट्रेलियन जग्गा दलाल महिला मेरी एलिजावेथ डोनाल्डसँग विवाह गरेकै कारण आफ्ना राजकीय उन्मुक्तिहरु गुमाए । सम्झिरहेछु प्रेमका लागि केही समय अघिका यी त्यागहरुलाई ? निकट भविष्यमा पूर्व बन्न लागेका, पूर्व भइसकेका र सुदुरपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु देशको मायामा राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्री पद पनि त्याग गरेको कुरा बताइरहँदा तिम्रो (लोकतन्त्रका) लागि त्याग्नलाई एउटै ज्यान बाहेक केही दिन नसक्ने म भन्न खोज्छु– भएको भए म पनि त्याग गर्ने थिएँ प्रधानमन्त्रीको पद र राजकुमारका सुविधाहरु ।
रुसमा जार शाही पतन भएपछि केरेन्स्कीको अध्यक्षतामा एउटा सर्वपक्षीय सरकार गठन हुने भयो । । तर उनले प्रिन्स क्रोपाटकिन कहाँ गएर अध्यक्षता गर्न आग्रह गरे र उनले सित्तैमा र चिठ्ठाजस्तो पद प्राप्ती आफ्नो सिद्धान्तको विपरित भएकोले बरु म जुत्ता सिलाएर मेरी प्रेमिकासँग रुखो सुखो खाएर बस्छु तर प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भनेर फर्काइदिए । उता उनको पारिवारिक प्रेमजीवन त्यही कारणले ध्वस्त भयो । उनी नालायक ठहरिए । यतिबेला तिमीजस्तो सुन्दरतम्, सुशील र आदर्श प्रेमीकाका लागि प्रधानमन्त्री पद पाउन लाग्दा होइन पाइसकेर र लुट्नु लुटेर त्याग्नेहरुका पछि लागेको देखेर छक्कैपर्छु म यता ।
साँच्चै तिमी एकदम सुन्दर थियौ । र , जब म तिमी सामु परेको थिएँ म त तिम्रा अघि मिठाइ पसलमा स्वतन्त्र छोडिएको एउटा निर्दोष बालकजस्तो जहाँसुकैबाट जेसुकै पनि झिकेर खान खोजेछु । लड्डु, रसवरी, पेँडा आदि आदि …फेरि सम्झन्छु होइन, तिम्रो प्रेमका लागि दुश्मनविरुद्ध क्रुरताका साथ लड्दालड्दै आफैँभित्र भएको तिमीप्रतिको प्रेम पनि मैले गुमाएछु । तिम्रै लागि लड्दा लड्दै अन्तिममा तिमीलाई नै गुमाउने भएँ । बसाइँ सरुँ । पहिला पहिला गरिबहरु बसाइँ हिँड्थे । अहिले त धनीहरु बसाइँ हिँड्छन्, त्यही राजा भएका देश जपान, बेलायत, फ्रान्स आदि आदितिर । मर्नका लागि विष किन्ने पैसा त हुन्न अनि मृत्युदण्डभन्दा कठोर जीवनदण्ड भोग्ने मान्छेलाई कतार, मलेसिया जान पनि ऋण कहाँ पाइन्छ र ? स्थिति सुधारेर तिमीलाई भेट्न त फेरि उही होला…!
त्यस्तो दःुस्वप्न विपनै राम्रो नभएकाहरुले नदिदाइकन देखिरहेका हुन्छन् किनकि यहाँ सँगसँगै बाँच्नेभन्दा बढी सँगसँगै मर्ने कसम खाइन्छन् । फेरि आत्महत्याका पनि इस्युहरु अचम्म अचम्मका छन् यतिबेला । जापानमा एउटी तिमीजस्तै टिनेजर बुद्धि भएकी चेलीले घरको आफ्नो कोठामा अभिभावकले आफूलाई मन नपर्ने रंग गरिदिएको भनेर आत्महत्या गरिछिन् । डर लाग्छ मलाई तिमीलाई त मर्न उक्साउने कति छन् कति । आफू मर्यो भने तिमी बाँच भन्ने होइन सँगसँगै मर्नुपर्छ भन्ने कसम खुवाइन्छ अनि तिमी उसैको जिन्दावाद भन्छ्यौ त मेरो के लाग्छ ? । जब कि मरे पनि तिमी बाँचिरहूँ भन्छु म । किन कुरा नबुझिरहेकी तिमीले ?
ठीकै छ अहिले सम्बन्ध केही चिसियो त के भयो ? तिम्रा बिटाका बिटा कुनै दिन चाहिन्छ भनेर जतन गरीगरी राखिएका बिटाका बिटा नोटहरु जो टुक्रा टुक्रा भएका छन्, तिनलाई जोडेर चलाउन सकिन्छ नि ? च्यातिएको नोट फेरि टाँसेर जीवन्त बनाएजस्तो फेरि किन सकिन्न मान्छेहरुका सम्बन्धहरुलाई जोड्न फेरि उसैगरी !
अधिवक्ता स्वागत नेपालको फेसबुकबाट साभार
गजुरी गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको चाङ : अध्यक्षको मासिक तलव ९० हजार , उपाध्यक्षको कति ? चाडपर्व खर्चसमेत सरकारी कोषबाटै